Manambady soamatsara ,niteraka, miasa, mahavelotena tsara fa tsy mpivarotena akory sanatria manambany ireo manao Ny madama no tena mankafy Nosokafako ho an ny lehilahy mahay mampirevy madama ity. Asa raha misy étude momba ireny efa vita na tsia, fa mety ahaliana ny maro raha misy manao fandalinàna momba azy. Manome ity fijoroana ho vavolombelona ity aho amin’izao fotoana izao satria nampanantena azy ireo aho fa handeha hatraiza hatraiza amin’ny aterineto, Facebook, hizara ireo asa tsara, raha toa ianao ka mitady hividianana karazana fampindramam-bola rehetra, dia manoro hevitra anao aho mba hifandray amin’izy ireo, , Mankasitraka lisitra, manaiky fotsiny ny Payslips anao, Tsidiho fotsiny ny trosanao antoka ary ny vola fampindramam-bola dia haverina ao amin’ny kaontinao ao anatin’ny latsaky ny 48 ora. Samy manana ny anarany izy ireo: Misy andro – Tselatra. Anao tao amin’ny toerana noho ny findramam-bola vahaolana! Ny vehivavy Lola
Moa ve ianao tai bola? Efa manana sary maro vonona aho izao. Ianao eo amin’ny toerana mety amin’ny olana ara-bola azonao atao! Tsy dia nanahirana ny nisambotra ilay ramatoa. Manome ity fijoroana ho vavolombelona ity aho amin’izao fotoana izao satria nampanantena azy ireo aho fa handeha hatraiza hatraiza amin’ny aterineto, Facebook, hizara ireo asa tsara, raha toa ianao ka mitady hividianana karazana fampindramam-bola rehetra, dia manoro hevitra anao aho mba hifandray amin’izy ireo,Mankasitraka lisitra, manaiky fotsiny ny Payslips anao, Tsidiho fotsiny ny trosanao antoka ary ny vola fampindramam-bola dia haverina ao amin’ny kaontinao ao anatin’ny latsaky ny 48 ora.
Nifandray tamin’izy ireo aho ary nanolotra ahy ny Loi Business ho fanamafisana ny trosako rehetra sy hampitombo ny asa fiompiako. Dia atao bien venue ilaisany rehefa ; hendry ,madio,tsy jiolamboto be, degany fa amin ny ilainay azy. I was able to hack my husband’s phone remotely and gained access to all mbolz texts and calls with the help of ghosthacker gmail. Na izany aza, ny fomba fiasanay, dia manolotra anao ny fahafahana hilaza ny habetsaky ny trosa mila ary koa ny fe-potoana azonao aloa EMAIL: Mifandraisa aminay dieny izao, ho fampahalalana bebe kokoa sy fampiharana.
Joy K Nampoina Silaka tenw. Efa nisy tka findramam-bola? Ao amin’ny Cash Vahaolana Investment Ltd. Manolotra ny fampindramam-bola manokana, fampindramam-bola amin’ny fisamborana trosam-bola, venture capital, fampindramam-bola, fanofanana fanabeazana, fampindramam-bola any an-trano na « fampindramam-bola amin’ny antony! Mba andefaso olona antsika amin’ny alalan’ny mailaka morrisonaniems consultant.
Andramo ary hahazo ny ATM karatra fotsy ankehitriny sy ho amin’ny tsara vintana ny olona izay mandray soa avy amin’izany karatra. If you can see my message do not hesitate to contact him immediately and he also handles all hacking jobs you want.
Toy izao hono no fanaony rehefa hivoaka hamaosavy izy. Mampindrana vola izahay avy ny olona teena fanampiana ara-bola, dia manome ny olona findramam-bola izany, izay misy ratsy bola na mila vola handoa faktiora, mba mampiasa vola amin’ny raharaham-barotra. Monday, May 28, Mpamosavy mitaingina lambodia tarihana vorondolo 4.
Katsaram-panahy mifandray amin’ny mailaka eto tnea fa raha liana ianao. Sa ve nolavina ny trosa amin’ny banky na ny fototra ara-bola noho ny antony isan-karazany?
Nitsoaka sifile ilay olona ka vetivety dia vory ny manodidina.
Nosokafako ho an ny lehilahy mahay mbpla madama ity. Ary te-haka ny mety ho fanovana eo amin’ny fiainanao. Ambondrona- Tsy Adala Aho. Raha hoatra anao daholo aloha ny lelahy rehetra dia tsy misy mihintsy ny vevavy mijaly amin’aresaka fitiana.
Lehilahy efapolo taona no manoratra eto. Ny vehivavy fanaja, naterany anao f’aza gaga, raha toa mitady solafaka ianao eritrereto ny anabavinao, mitazona ny teny nomeny, f’izany no tena fahendrenyfa izy refa tia dia tia miandrandra anao ho doria.
Mila vola ny manomboka amin’ny raharahan’ny hafa? Contact us izao tdna alalan’ny cash. Raha mila trosa fohy ianao, dia mifandray aminay amin’ny alàlan’ny mailaka: Samy manana ny anarany ,ôla ireo: Amin’ny alàlan’ny fifanarahana ara-drariny, Ny trosa dia azo alaina ary alefa any amin’ny mpampisambotra ny fotoana fohy indrindra. Posted by Ton’S at Mariho ny valiny rehetra dia tokony ho kopia ary alefaso amin’ity mailaka ity wenzelronaldjoseph gmail.
Manambady soamatsara ,niteraka, miasa, mahavelotena tsara fa tsy mpivarotena akory sanatria manambany ireo manao izany fa rahavavy daholo ireny fa tiako hikambana ato amin ity pejy ity ny madama mpankafy sy ny mpivady manala azy. Ve ianao na amin’inona na ara-bola mikorontana sy te-handamina ny olana?
Mila vola avy hatrany ve ianao handoa ny trosanao na Tiaa trosa hanatsarana ny orinasa ve ianao? Asa na izay olona kendreny io iharahany misotro io na olon-kafa.